lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo kwi-windows 10 – Ukusekela Windows 10
lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo kwi-windows 10
Ukuba ucinezela iqhosha elithiQhagamshelakwiziko lentshukumo akusifumani isixhobo sakho, zama oku kulandelayo:
Qinisekisa isixhobo se-Windows sakho sixhasa i-Bluetooth nokuba silayitiwe. Uza kubona iqhosha le-Bluetooth kwiziko lentshukumo.
Ukuba kuliboni iqhosha le-Bluetooth, zama ukuhlaziya idrayivu yesixhobo sakho. Nantsi indlela: Yiya kuQalisa, ngenisa Umanejala wesiXhobo, khetha kuluhlu lweziphumo, emva koko, Umanejala wesiXhobo, khangela isixhobo sakho, cofa ekunene (okanye ucinezele ubambe), ukhethe Hlaziya iSoftwe yeDrayivu, khetha Khangela ngokuzenzekelayo isoftwe yedrayivu ehlaziyiweyo, uze ulandele amanyathelo alandelayo.
Ukuba i-Bluetooth ilayitiwe, yaye idrayiva isexesheni, kodwa isixhobo sakho asisebenzi, zama ukushenxisa isixhobo uze usidibanise kwakhona. Nantsi indlela: Yiya kuQalisa, ngenisa Izixhobo, khetha i-Bluetooth, khetha isixhobo, khetha Shenxisa isiXhobo, emva koko uzame ukudibanisa kwakhona.
Qinisekisa isixhobo se-Windows sakho sixhasa i-WiGig nokuba silayitiwe. Ukuba iPC yakho ixhasa i-WiGig, uza kubona iqhosha le-WiGig Iisethingi > Imodi yenqwelo-moya.
Qinisekisa umboniso uxhasa i-WiGig. Ukuba akuyixhasi, uza kudinga idokhi ye-WiGig.
Previous Previous post: lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo kwiselfowuni ye-windows 10
Next Next post: khumbula iiphaswedi kwi-microsoft edge